🥇Funda indlela yokurhweba ngeCrypto ngoJanyuwari ka-2022 | Funda isiKhokelo soRhwebo esi-2!
Funda ukuba ungarhweba njani ngeCrypto-Funda isiKhokelo esi-2 sokuGqibela kuRhwebo kwi-Crypto yeRhwebo!
Ukuhlaziywa: 24 January 2022
I-2021 iqale kakuhle ngokumangalisayo kwimveliso ye-crypto. Ngomdla ohlaziyiweyo ovela kumanani abalulekileyo, ixabiso lemali yedijithali kulindeleke ukuba inyuke ngakumbi kwixesha elizayo.
Oko kwathethiyo, i-crypto iyaqhubeka ukuba yenye yezona ntengiso zorhwebo zibambekayo. Ngenxa yoko, ukuba ujonge ukungena kwisenzo-kubaluleke kakhulu ukuba uxhobile ngolwazi olufunekayo lwendlela urhwebo lwe-crypto olusebenza ngayo ngaphambi kokuba ungene.
Kule Funda indlela yokuThengisa isikhokelo se-Crypto, wUkuhamba ngeendlela ezisisiseko zolu didi lwee-asethi zedijithali, uxoxe ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, kwaye ndikunike ingcaciso ngendlela yokuphuhlisa indlela yokurhweba.
Ukuqhubela phambili ezantsi, sikwanika neengcebiso malunga nendlela onokufumana ngayo umthengisi olungileyo ukuqala ukurhweba ngee-cryptocurrensets ukusuka kwintuthuzelo yekhaya lakho.
Icandelo 1: Qonda iziseko zeNtengiso ye-Crypto
Ukuba umtsha kurhwebo lwe-cryptocurrency, inyathelo lokuqala kukuqonda iziseko zendlela le asethi isebenza ngayo. Kananjalo, masiqale ngeziseko ezingenanto zethambo.
Usenokuba sele uqhelana nomxholo weedigital zemali ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Ngamagama alula, i-cryptocurrencies yimali yedijithali. Azikhutshwanga yibhanki esembindini okanye urhulumente, kwaye nexabiso lawo alixhaswanga yiyo nayiphi na imali ye-fiat.
Yonke imali yedijithali luphawu olugcinwa kwisipaji sedijithali. Ukuba u-Bitcoin, umzekelo, ungasebenzisa iinkozo zemali njengotshintshiselwano ngeemveliso ezininzi kunye neenkonzo.
Yonke le ntengiselwano iya kugcinwa kwileja efikeleleka esidlangalaleni eyaziwa njenge-blockchain. Oku kudala irekhodi elisisigxina elingenakuguqulwa okanye lonakaliswe ngokwenza i-cryptocurrencies iklasi ekhethekileyo yeasethi.
I-cryptocurrensets yokuqala yeza kwihlabathi ngo-2009, xa i-Bitcoin yaqaliswa okokuqala. Ebangelwa yimpumelelo yeBitcoin, ngoku kukho ii-cryptocurrensets ezingaphezu kwe-8,000 ezikhoyo-uninzi lwazo onokuzithengisa kwi-Intanethi.
Ngoku ukuba sinezinto ezisisiseko phantsi, masithethe ngendlela onokuyenza ngayo trade i-crypto.
Zithini iziseko zoRhwebo lweCrypto?
Ukurhweba nge-idijithali yemali kujikeleze ukuthelekiswa kwamaxabiso exesha elizayo kwengqekembe yedigital ebuzwayo. Umzekelo, xa uthengisa i-Bitcoin - uzama ukuqikelela ukuba ixabiso lengqekembe liya kunyuka okanye liwe kwindawo yentengiso evulekileyo.
Ubeka ukuthenga okanye ukuthengisa iodolo ngokusekwe kwintelekelelo-yakho ngethemba lokufumana inzuzo kwinkqubo.
Nanku umzekelo osebenzayo wentengiso ye-cryptocurrency:
Masicinge ukuba ufuna ukurhweba ngeLitecoin ngokuchasene ne-USD.
Oku kuya kuchazwa njenge-LTC / USD kwiqonga lakho elikhethiweyo lokuthengisa nge-cryptocurrency.
Ixabiso langoku le-LTC / USD licatshulwe kwi- $ 177.
Uyila kuthenga iodolo exabisa i-500 yeedola kwisibini.
Kwiiyure ezimbalwa kamva, inqanaba lotshintshiselwano lwe-LTC / USD lonyuka laya kwi- $ 190
Oku kuguqulela ekunyuseni kwexabiso nge-7.3%.
Kwisibonda sakho seedola ezingama-500, wenze ingeniso eyi- $ 36.50.
Lo ngumzekelo oqhelekileyo worhwebo lwe-cryptocurrency xa ucinga ukuba ixabiso le-asethi liya kunyuka kwixesha elifutshane.
Kwicala elisezantsi, ungaya 'mfutshane' ukuba ulindele ukuba ixabiso lihle. Oku kunokwenzeka ngokuthengisa i-crypto CFDs. Siza kungena kwi-ins kunye nokuphuma kwintengiso emfutshane kamva kule Ndlela yokuThengisa isikhokelo se-Crypto.
Ukushwankathela, urhwebo lwe-crypto likuvumela ukuba uthathe ithuba kokubini ngaphezulu kwaye Amaxabiso asezantsi e-asethi-unikezwe ukuba uqikelela intengiso ngokuchanekileyo.
Ngeendlela ezininzi, urhwebo lwe-imali yedatha lutsala ukufana okuninzi kurhwebo lwe-forex. Kuzo zombini iimarike, uzama ukuthelekelela izinga lotshintshiselwano ngababini bemali. Ukongeza, zombini iiasethi zidume ngokulinganayo ngenxa yokungazinzi - ubuncinci kwimeko ye-exotic.
Ngapha koko, kufana ne-forex, amaxabiso ee-cryptocurrensets nawo ayatshintsha rhoqo kwisibini okanye njalo. Ukuba ucinga ngokurhweba nge-imali yedatha, kuyakufuneka uqonde ukuba yintoni ebangela le ntshukumo yamaxabiso kwaye apho inokubakho kungekudala.
Kananjalo, ngaphambi kokwenza nayiphi na imarike, kufuneka wenze umsebenzi wesikolo kwimali efanelekileyo yedijithali nakwimakethi yayo.
Izibini zokurhweba ngeCrypto
Kwilizwe le-imali yedatha, ukurhweba ngababini zizinto ezinokutshintshiselana. Oku kunokuhlelwa ngokubanzi ngokwamacandelo amabini - ukurhweba ngambini ze-crypto kunye nezohwebo zokurhweba ngababini.
Makhe siqwalasele ngokuthe ngqo kuhlobo ngalunye lwesibini sokurhweba esingezantsi.
Uqhagamshelwano lweDigital cryptocurrency
Izibini ze-Crypto-cross zibandakanya iimali ezimbini zedijithali ezirhwebiweyo ezithengiswa omnye komnye.
Umzekelo, ukuba ubona isibini sokurhweba i-BTC / XLM-oku kuthetha ukuba i-BTC (i-Bitcoin) yimali esisiseko, kwaye i-XLM (iStellar) yimali ye-quote.
Ukuba uthengisa i-BTC / XLM, nantsi indlela urhwebo oluza kusebenza ngayo:
Masithi i-crypto-cross pair BTC / XLM inexabiso nge-110,023.
Oku kuthetha ukuba kuyo yonke i-Bitcoin oyithengisayo, uya kufumana i-Stellar eyi-110,023.
Umsebenzi wakho njengomrhwebi kukucinga ukuba eli nqanaba lotshintshiselwano nge-crypto-cross pair liya kunyuka okanye liwe.
Njengoko ubona, le nkqubo inokuba yinto encinci kubarhwebi-ngakumbi abaqalayo. Ifuna ukuba ube nolwazi olomeleleyo kuzo zombini i-cryptocurrensets kwisibini sokurhweba kunye nakwiimarike zabo.
Ngenxa yoko, abathengisi abaninzi be-novice bakhetha ukuthengisa i-cryptocurrency ngokuchasene nemali eyaziwayo ekhutshwe ngurhulumente-enje ngedola yaseMelika okanye i-euro.
Oku kusizisa kudidi lwesibini lokurhweba nge-imali yedatha.
Njengoko besitshilo apha ngasentla, imali ye-fiat-to-crypto yenziwa yimali ye-fiat kunye nemali yedijithali.
Xa ubona isibini sokurhweba i-BTC / i-USD okanye i-BTC / i-EUR, ichaza ixabiso lemali ye-imali yedatha ye-Fiat. Umzekelo, ukuba i-BTC / i-USD ibiza ama-40,000 eedola- oko kuthetha ukuba iBitcoin enye inexabiso elingama- $ 40,000 kwiidola zaseMelika.
Eyona nto iqhelekileyo, ii-cryptocurrensets zithengiswa ngokuchasene needola zaseMelika, kuba yimali ebhentshini yehlabathi. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kwiqonga lokurhweba kwi-Intanethi, unokukwazi ukurhweba ngeedigital currencies ngokuchasene nezinye iimali ze-fiat ezinje ngeeponti zaseBritane, i-euro, iJapan yaseJapan, iidola zase-Australia, kunye nabanye.
Nanku umzekelo wentengiso ye-fiat-to-cryptocurrency.
Uya kufumana isibini esichazwe njenge-LTC / USD kwiqonga lakho lokuthengisa.
Ixabiso le-LTC / USD licatshulwe kwi- $ 180.
Ukukholelwa ukuba isibini asixabisekanga- ubeka iodolo yokuthenga exabisa i-2,000 yeedola.
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, i-LTC / iXabiso lixabisa i $ 210.
Oku kuthetha ukuba ixabiso lesibini lenyuke nge-16.66%.
Kananjalo, ubeka iodolo yokuthengisa kwimali kwiinzuzo zakho.
Kolu rhwebo, ubuyise i-2,332 yeedola- nge-332 yeedola njengenzuzo yakho.
Phantse zonke i-cryptocurrencies ezikhoyo kwimarike yanamhlanje zinokuthengiswa ngokuchasene nezinye iimali ze-fiat.
Inqaku elongezelelekileyo eliqatshelweyo lelokuba ii-fiat-to-cryptocurrency ngababini zihlala zithengiswa ngeCFDs (ikhontrakthi yomahluko). Ngamagama alula, xa usebenzisa iiCFDs, awuyi kuba ngumnini wempahla ngqo. Endaweni yoko, uya kube urhweba ngesixhobo semali esithi iingoma Ixabiso lehlabathi lokwenyani le-crypto-asethi.
Olona ncedo luphambili lokuthengisa ii-CFD kukufumana ukufikelela kwiikhomishini zero kunye nokusasazeka okuqinileyo. Ngapha koko, uya kuba nenketho yokusebenzisa ubungakanani kumashishini akho, kunye nokuthengisa okufutshane ngokulula.
Ungayithengisa njani i-Crypto: Ixesha elifutshane okanye ixesha elide?
Xa ufunda ukurhweba nge-crypto okokuqala, kufuneka ujonge ukuba zeziphi iinjongo zakho zezemali. Umzekelo, uyafuna ukutyala imali kwi-crypto iminyaka eliqela, okanye urhwebe ngokusebenzisa isicwangciso sokurhweba ngemini / ukurhweba?
Makhe siqwalasele ukuba ukhetho ngalunye luquka ntoni kwaye zeziphi izibonelelo zemali ezikhoyo ukuququzelela oku.
Eyona ndlela idume kakhulu yokuzibandakanya kurhwebo lwe-cryptocurrency lwexesha elifutshane kukusebenzisa iiCFDs. Njengoko besesitshilo ngaphambili, iiCFD zikuvumela ukuba uthengise ngee-imali yedatha ngaphandle kokuthatha ubunini beasethi.
Ngamanye amagama, awunyanzelekanga ukuba uzikhathaze ngokugcina i-cryptocurrency yakho kwisipaji sedijithali okanye ukhuseleko lwemali yakho yedijithali. I-CFD iya kuthi nje ibonakalise ixabiso le-cryptocurrency kwaye ikunike ithuba lokufumana inzuzo kuzo zombini eziwayo kunye nakwiimarike ezikhulayo.
Umzekelo, xa ukholelwa ukuba ixabiso le-cryptocurrency liza kunyuka, ungathatha indawo ende kwaye ubeke i-oda yokuthenga. Nje ukuba ixabiso linyuke, uyakwenza i-odolo yokuthengisa ukuze uphume-wenze inzuzo ngokulandelelana.
Ngokuchasene noko, ukuba ucinga ukuba ixabiso le-cryptocurrency liza kwehla- ungahamba ngokufutshane ngokubeka iodolo yokuthengisa. Ukuba ukuthelekelela kwakho kuchanekile, uya kubeka i-oda yokuthenga ukuze ufumane imali kwaye ngenxa yoko ujike inzuzo.
Masibonise indlela i-crypto CFD esebenza ngayo ngokwenza nomzekelo:
Ixabiso le-DASH / USD lixabiswa kwi- $ 120.
Oku kuthetha ukuba i-DASH CFD iya kubekwa amaxabiso e- $ 120.
Ukuba ucinga ukuba ixabiso le-DASH liza kuwela-uyakwenza i-odolo yokuthengisa.
Ukuba ucinga ukuba ixabiso le-DASH liza kunyuka-uyakwenza i-oda yokuthenga.
Ukuba ixabiso le-DASH lihamba kwicala eliqikeleleyo, uya kwenza inzuzo.
Rhoqo abathengisi beCFD bexeshana bagcina izikhundla zabo zivulekile ngaphezulu kweentsuku okanye iiveki ezimbalwa. Kungenxa yokuba iimveliso zeCFD ezixhamlileyo nazo ziqhotyoshelwe nemirhumo yokufumana imali ubusuku bonke.
Intsingiselo-busuku ngabunye ugcina indawo yakho ye-CFD ivulekile, kuyakufuneka uhlawule imali kumrhwebi wakho. Imali onoxanduva lokuyihlawula ixhomekeke kwiqonga olikhethileyo kwaye ubambe malini kurhwebo.
Thenga kwaye ubambe i-Crypto
Xa kuziwa kwizicwangciso zexesha elide, uya kuba utyala imali kwi-cryptocurrensets kunokuba uzithengise. Oku kuhlala kubizwa ngokuba sisicwangciso 'sokuthenga nokubamba', esaziwa njenge-HODLing phakathi kwabatyali mali be-crypto.
Ngamagama alula, oku kuthetha ukuba uyakuthenga ii-cryptocurrensets kwaye uzibambe kangangeenyanga okanye iminyaka-de kube lixesha elililo lokuthengisa iingqekembe ngenzuzo.
Ukuba ukhetha ukuya kwisicwangciso sexesha elide, kungcono ukuba kuthenga imali yakho yedijithali yemali evela kumthengisi othembekileyo kwi-Intanethi. Ukugcina ixesha elithile, sicebisa ukuba uqwalasele i-eToro-iqonga lokurhweba elilawulwa yi-FCA, i-CySEC kunye ne-ASIC.
Ngabathengi abangaphezulu kwezigidi ezili-17, i-eToro yakhe igama elisebenza ixesha elide kwindawo yentengiso ekwi-Intanethi. Umrhwebi nawo uza ngokudityaniswa neqonga lokurhweba kunye nesipaji se-crypto- ukuze ukwazi ukulawula lonke utyalomali lwakho ngqo kwideshibhodi ye-Intanethi. Eyona nto ibaluleke kakhulu, i-eToro ikuvumela ukuba utyale kwaye urhwebe nge-cryptocurrensets eyi-100% ngaphandle kwekhomishini.
Njengoko unokuthelekelela, iqhinga lokuthenga nokubamba lingakumbi kukuthandeka kwabo bangafuni kuzixakekisa ngokutshintsha kwemakethi okwethutyana. Iyakusindisa ekubeni wenze uphando kunye nohlalutyo lobuchwephesha ukuze ufumane amathuba okurhweba ngokuchanekileyo.
Ngesi sizathu, abathengisi be-novice bahlala bekhetha ukuthengisa i-cryptocurrency besebenzisa isicwangciso sexesha elide. Kwimeko apho ufuna ukuthatha le ndlela, i-eToro ikunika ukufikelela kwii-cryptocurrensets ezili-16 nangaphezulu kwezibini ezingama-90 + zorhwebo ukwakha iphothifoliyo eyahlukeneyo.
Icandelo 2: Funda ii-Orders ze-Crypto
Abarhwebi be-Cryptocurrency bahlala bejongana nokungazinzi okukhulu kunye nokufumana amandla. Kananjalo, kubalulekile ukuba ube nolawulo kwimisebenzi yakho. Oku kunokwenzeka kuphela ngokubeka iseti elungileyo yee-odolo zokuthengisa.
Kulabo abangaziyo, ii-odolo zorhwebo zikuvumela ukuba unxibelelane nomrhwebi wakho. Ngamagama alula, iodolo yorhwebo idlulisela kumthengisi wakho ukuba ufuna ukungena njani kwintengiso, ukuba ufuna ukubamba malini, kwaye ufuna ukuphuma njani kurhwebo.
Kweli candelo lethu Funda indlela yokuThengisa isiKhokelo se-Crypto, sihamba ngeyona odolo iluncedo oya kuyidinga ukuze uyiqonde.
Thenga iiOrder kwaye Thengisa iiOda
Siza kuqala ngezona ndlela zibalulekileyo zeodolo- thenga kwaye uthengise iiodolo. Le miyalelo iyimfuneko kuzo zonke iintlobo zokurhweba- ngaphandle kwempahla.
Kwimo yayo esisiseko, ukuba ulindele ukuba ixabiso lemali engezantsi yedijithali liza kunyuka, uya kungena kwintengiso nge kuthenga order kwaye uphume ngayo thengisa umyalelo.
Ngokuchasene noko, ukuba uyakholelwa ukuba ixabiso leasethi yedijithali ijolise kwinto esezantsi- uya kungena nge thengisa odola kwaye uphume kurhwebo nge kuthenga umyalelo.
Njengoko ubona, kuya kufuneka usebenzise zombini ukuthenga nokuthengisa iiodolo kulo lonke urhwebo. Uya kuvula indawo ngeodolo enye, kwaye uya kuvala urhwebo ngolandelelwano oluchaseneyo.
Ii-Orders zeNtengiso kunye neMiyalelo yeeMida
Kwimarike ye-cryptocurrency ehamba ngokukhawuleza, ixabiso lemali yedijithali liguquka rhoqo emva komzuzwana. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba ube nesicwangciso sokungena kuyo yonke iodolo yakho yokuthengisa.
I-odolo ezimbini eziqhelekileyo zokungena ezisetyenziselwa urhwebo nge-crypto zii-odolo zentengiso kunye nemida yokunciphisa. Le miyalelo isetyenziselwa ukucacisa kumthengisi ukuba leliphi ixabiso lokungena ofuna ukulithatha kurhwebo.
Makhe sicacise ngakumbi.
Umyalelo wentengiso uya kuyalela umrhwebi ukuba awugqibe kwangoko umyalelo. Kuthetha ukuba umthengisi kuya kufuneka enze iodolo ngexabiso elilandelayo elilandelayo. Olu hlobo locwangco lusetyenziswa ngokubanzi ukuthatha amanyathelo akhawulezileyo xa ubona ithuba lokurhweba elinenzuzo livulekile.
Oko kwathethi, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-odolo yentengiso ayinakwenziwa ngexabiso lokugqibela lokuthengisa. Njengoko imakethi ye-imali yedatha ngokuguquguqukayo, ixabiso apho i-odolo yenziwa khona linokwahluka kwixabiso apho i-odolo ibekwe khona.
Makhe siqwalasele ukuba iCardano okwangoku ixabiso nge $ 0.9003.
Uyalithanda eli xabiso, ke unqwenela ukubeka urhwebo kwangoko.
Ke ngoko ubeka 'iodolo yentengiso', ebonisa ukuba umrhwebi kufuneka enze iodolo yakho kwangoko.
Nje ukuba yenziwe, ujonge iodolo.
Ungaqaphela ukuba endaweni ye-0.9003 yeedola, ungene kwiimarike nge-0.9005.
Njengoko ubona, umahluko uya kuba mncinci kwaye awuyi kuchaphazela kakhulu amandla akho okwenza inzuzo. Lo mahluko uqhelekile kwii-odolo zentengiso njengoko amaxabiso e-crypto ehlala eguquguquka.
Ukuba ufuna ukungena kurhwebo ngexabiso elithile, kulapho kungena khona umda wokungena.
Umyalelo osikelwe umda ukuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise imali yexabiso ledatha ngexabiso elithile. Makhe sibone ukuba umyalelo wokunciphisa umda uza kusebenza njani nomzekelo wethu wangaphambili weCardano.
Masithi iCardano okwangoku inexabiso le- $ 0.9003.
Ufuna ukubeka i-oda yokuthenga, kodwa kuphela xa ixabiso leCardano lenyukile laya kwi-0.9015 yeedola.
Kananjalo-ubeka umyalelo wokunciphisa kwi $ 0.9015.
Kule meko, umrhwebi wakho uya kuyenza i-odolo yakho ukuba kwaye xa ixabiso leCardano lenyuka laya kwi- $ 0.9015. Ukuba akunjalo, iodolo iya kuhlala ixhonywe de ube urhoxisa ngokwakho.
Misa ii-Orders zokuLawula kunye neMiyalelo yokuThatha inzuzo
Kunye nesicwangciso sokungena, ufuna isicwangciso esomeleleyo sokuvala urhwebo lwakho lwe-crypto. Indlela esisiseko yokwenza oku kukudlula 'ngokuphulukana nelahleko' kunye 'nokuthatha inzuzo'.
Misa ii-Orders zokuyeka
I-odolo yokuyeka ilahleko yenye yeyona odolo iluncedo ngelixa uthengisa imali yedatha. Ikuvumela ukuba unciphise ilahleko ezinokubakho ngokunciphisa umngcipheko. Ngamanye amagama, unokuthatha isigqibo ngexabiso ofuna ukuphuma kulo urhwebo-kwimeko apho imakethi ye-crypto ichasene nengqikelelo yakho.
Masicime inkungu ngomzekelo.
Ufuna ukubeka i-oda yokuthenga kwi-LTC kwi-185 yeedola.
Nangona kunjalo, ufuna ukunqanda umngcipheko wokulahleka ngaphezulu kwe-2% kurhwebo lwakho.
Ke ngoko ubeka i-odolo yokulahleka kokumiswa kwi-2% ngaphantsi kwexabiso lokungena- kwi-181.30 yeedola.
Ngokuchasene noko, ukuba ufuna ukubeka iodolo yokuthengisa, ungacwangcisa i-stop-loss order nge-2% ngaphezulu kwexabiso lokungena- nge-188.70 yeedola.
Ukuba urhwebo aluhambi ngokwentelekelelo yakho, umrhwebi wakho uya kuvala urhwebo ngokuzenzekelayo kumyalelo wokulahleka kokumisa owuchazileyo- ukuthintela nayiphi na ilahleko ngaphaya kwexabiso le-2% olisetileyo.
Sebenzisa ii-odolo zokulahleka kokuyeka yenye yeendlela zokuzenzekelayo ukuthengisa kwakho, ke akufuneki ukuba ugcine ngesandla iithebhu kwintengiso ngalo lonke ixesha lokuvula kwakho.
Imiyalelo yokuthatha inzuzo
Ngoku ukuba uyayazi indlela yokungena kwintengiso kunye nendlela yokunciphisa iilahleko zakho, ekuphela kwento eseleyo yokuchaza yindlela oyilawula ngayo inzuzo yakho. Ngokubalulekileyo, kubalulekile ukuba ungene kurhwebo lwe-cryptocurrency unoluvo lokuba ufuna ukwenza malini.
Umyalelo wokuthatha inzuzo usetyenziselwa ukubonisa umrhwebi wakho ukuba yeyiphi injongo ekujoliswe kuyo. Oku kuyakuvumela umthengisi ukuba avale ngokuzenzekelayo urhwebo kwinzuzo akuba efikelele kwinqanaba elichaziweyo.
Masithi ubeke i-odolo yokuthenga kwi-LTC ulindele ukuba ixabiso lemali yedijithali inyuke.
Ixabiso langoku le-LTC yi- $ 185.
Ufuna ukwenza inzuzo yeepesenti ezi-5-ke useta i-take-profit kwi- $ 194.25.
Ukuba ixabiso le-LTC linyuka laya kwi- $ 194.25, umrhwebi wakho uya kuyenza kwangoko i-odolo yakho yokuthatha inzuzo kwaye athengise isikhundla-sokutshixa inzuzo yakho yesi-5%.
Njengoko ubona, unokubeka ilahleko yokumisa kunye nokuthatha inzuzo-mali ngapha nangapha kwexabiso lakho lokungena. Ayinamsebenzi ukuba ixabiso lihamba kweliphi icala, umrhwebi wakho uza kuvala amashishini akho ngokuzenzekelayo-ngexabiso olichazileyo.
Inxalenye 3: Funda uLawulo loMngcipheko weCrypto
Ulawulo lomngcipheko yinto ebalulekileyo xa ufunda ukuthengisa nge-crypto. Njengayo nayiphi na enye intengiso, akunakwenzeka ukuba uhlale kude nomngcipheko xa uwonke. Emva kwayo yonke loo nto, ukuze wenze imali, kufuneka ubeke emngciphekweni imali.
Oko kwathethileyo, ngenene kunokwenzeka ukuba wenze amanyathelo abaliweyo kunye nokunciphisa umda welahleko yakho. Ecaleni, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba yeyiphi imali onokufikelela kuyo kurhwebo ngalunye lwe-crypto.
Kwiziko lokurhweba, izilumkiso ezinjalo zaziwa 'njengeendlela zokulawula umngcipheko'. Oku kubandakanya amanyathelo othintelo owabekayo endaweni ukukhusela umdla wakho nakwimali yakho yorhwebo.
Apha sixoxa ngeendlela ngeendlela zokulawula umngcipheko ekufuneka uzikhumbule xa ufunda ukuthengisa nge-crypto okokuqala.
Ipesenti esekwe kuLawulo lweeCrollo zeBhanki
Inkqubo yolawulo lwebhanki ngumxholo osisiseko wokurhweba nayiphi na iasethi. Ngamagama alula, ichaza inani lesibonda ozimisele ukubeka umngcipheko kurhwebo olunye. Abahwebi bahlala bechaza ulawulo lwabo lwebhanki ngokweepesenti.
Umzekelo, unokuseta umda kuzo zonke izikhundla zakho nge-2%. Oku kuthetha ukuba awuzukubeka emngciphekweni ngaphezulu kwe-2% yemali yakho yorhwebo ekhoyo Ongatshatanga urhwebo lweemali zedijithali. Nokuba ithembisa kangakanani intengiso, uya kuhlala unamathela kule 2%.
Ecaleni kwemakethi, imali yakho yokurhweba nayo iya kutshintsha. Ngenxa yoko, kuya kufuneka uphinde ubalise ulawulo lwakho lwebhanki ngokubhekisele kwimpumelelo yakho yorhwebo okanye ukusilela.
Cinga ngalo mzekelo:
Masithi une- $ 5,000 kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Ugqiba ekubeni ungabeki ngaphezulu kwe-2% yemali yakho eseleyo.
Kananjalo, elona xabiso liphezulu onokuthi usebenze kulo urhwebo nge-cryptocurrency yi- $ 100.
Masithi, emva kweveki elungileyo, ngoku une- $ 7,500 ekhoyo kwiakhawunti yakho.
Emva koko, ngoku unokubambisa ukuya kuthi ga kwi-150 yeedola- eyi-2% yeedola ezingama-7,500 XNUMX.
Ukuba iimali zakho zorhwebo ziye zehla zaya kuthi ga kwi-3,000 yeedola, ngokwesicwangciso sakho sangoku solawulo lwe-bankroll, ungabamba kuphela ukuya kuthi ga kwi-60 yeedola-njalo
Ukurhweba nge-Crypto ngomngcipheko kunye noMvuzo weRatio
Enye indlela yokulawula urhwebo lwakho lwe-cryptocurrency kukuthatha isicwangciso esisekwe kumyinge womvuzo womngcipheko.
Ukubeka ngokulula, ucinga inani lenzuzo ofuna ukujolisa kuyo kunye nokuba ungabeka umngcipheko ongakanani ukuba uzimisele ukuwufezekisa.
Yitsho ukuba unexabiso lokufumana umngcipheko kwi-1: 1.5
Intsingiselo- kuyo yonke i- $ 1 uzimisele ukubeka emngciphekweni, unethemba lokwenza inzuzo eyi- $ 1.5.
Ngamanye amagama, ukuba ubeka i-100 yeedola, ufuna ukwenza ingeniso eyi- $ 150.
In addition to the previous metric, you can also use the scheme described in the i-crypto yokuthengisa i-bot blog — if the resulting ratio is greater than 1.0, the risk is greater than the profit potential. If the ratio is less than 1.0, the profit potential is greater than the risk.
Njengoko ubona, umgaqo ulula, usenza esi sicwangciso-nkqubo silungele abo baqala ukuqala kunye neengcali ezinamava. Ungazisebenzisa ezi ndlela zokufumana umngcipheko usebenzisa inzuzo kunye nokuyeka ukulahleka kweeodolo esele sizikhankanyile ngasentla.
Kulabo abatsha kumzi mveliso wokurhweba - ukusebenzisa amandla kwenza ukuba urhwebe ngemali eninzi kunawe. Uya kuyifaka into onokukwazi ukuyifikelela kwaye ngokuyimfuneko uthathe okunye njengemali mboleko kuyo umthengisi wakho.
Njengoko unokuthelekelela, ukusebenzisa amandla kukuvumela ukuba wandise inzuzo yakho ngokucacileyo. Oko kwathiwa, qaphela ukuba inokukhulisa iilahleko zakho.
Jonga lo mzekelo:
Une- $ 2,000 kwiakhawunti yakho yorhwebo, kwaye ufuna ukuyibeka kwi-BTC / USD
Umrhwebi wakho ukunika amandla ku-1: 20 -thetha ukuba unokwandisa isibonda sakho sama-20.
Usebenzisa amandla e-1: 20, kwaye ngoku isikhundla sakho sixabisa i-40,000 yeedola.
Ukuba ufake isicelo se-1: 10, isikhundla sakho siya kubalelwa kwi- $ 20,000.
Ubungakanani bendlela onokufikelela kuyo iya kuxhomekeka kwizinto ezininzi. Inye into ekufuneka uyiqaphele kukuba ukurhweba kunye nomgangatho kuthathwa njengokuyingozi kwiindawo ezininzi zehlabathi-kwaye ke kulawulwa kakhulu.
Umzekelo, abahlali base-US abavumelekanga ukuba bathengise ii-CFDs okanye bathathe ithuba lokuphakama. Kwelinye icala, e-UK, unokufaka isicelo kuzo zonke izinto ze-CFD, ngaphandle kwe-crypto.
Ngokwahlukileyo, amanye amazwe ehlabathini akanayo ikhephu ngaphezulu kwemida yokulinganisa. Awuyi kumangaliswa kukubona ukuphakanyiswa kunikezelwa phezulu njenge-1: 1000 kumaqonga athile. Nangona kunjalo, njengoko besesitshilo ngaphambilana, xa usebenzisa imida emikhulu yokuphakamisa imeko - ukwamema umngcipheko ongafanelekanga.
Masikubonise ngomzekelo wendlela ubungakanani obunokuchaphazela ngayo urhwebo:
Ufuna ukubeka i-oda eyi-100 yokuthenga kwi-NEO, enexabiso elingama- $ 35 ngengqekembe nganye.
Ugqiba kwelokuba usebenzise ubungakanani be-1: 5 -thetha ukuba, isibonda sakho siphelele sixabisa i $ 1,000 ngoku.
Emva kweeyure ezimbalwa, ixabiso le-NEO lenyuka nge-2%
Ngaphandle kwempembelelo-inzuzo yakho kule yorhwebo iya kuba yi- $ 2.
Ukusukela ufake isicelo sokuphakama kwe-1: 5 - inzuzo yakho inyuswe yaya kuthi ga kwiidola ezili-10.
Njengoko kubonakala, ukuxhathisa yindlela elula yokunyusa inzuzo yakho. Kwangelo xesha, khumbula ukuba ukuba ixabiso le-NEO belihlile, ilahleko yakho ngeyonyuselwe.
Icandelo 4: Funda ngokuhlalutya amaxabiso e-Crypto
Njengokuba ufikile ukuza kuthi ga ngoku, kuya kufuneka ngoku ube nokuqonda okusisiseko ukuba kubandakanya ntoni na ukurhweba nge-imali yedatha, iintlobo zeodolo ozisebenzisayo, kunye nendlela yokulawula umngcipheko.
Ukuze ufumane esona siqalo sihle kurhwebo lwe-crypto, kuya kufuneka uxhomekeke kwidatha ebandayo. Abarhwebi basebenzisa iindlela ngeendlela ukuqonda izinto ezichaphazela amaxabiso e-crypto.
Kweli candelo, sixoxa ngendlela onokuhlalutya ngayo amaxabiso e-crypto ukwenza izigqibo zokurhweba.
Uhlalutyo olusisiseko kwiCrypto
Uhlalutyo olusisiseko luvavanya imiba yezoqoqosho neyezemali enegalelo ekungazinzini kwemali ye-cryptocurrency. Olu hlobo lohlalutyo lubalulekile ukuze uzigcine uhlaziywa kunye nophuhliso olutsha lweeasethi zedijithali.
Njenge-asethi entsha ngokuthe kratya, iinethiwekhi ze-cryptocurrency zisebenza ngokwahlukileyo kancinci kuneeasethi zesiko. Umzekelo, xa uhlalutya imakethi ye-crypto, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuqhubela phambili kwe-blockchain kunye nomngcipheko wokhuseleko. Imiba enjalo ayisebenzi kukhuseleko oluqhelekileyo olufana nesitokhwe kunye nezinto zorhwebo.
Nalu uluhlu lwezinto ekufuneka ujonge kuzo xa usenza uphando ngorhwebo lwe-crypto:
Iimali zentengiso yemali nganye
Inani elipheleleyo leengqekembe ezikhoyo
Ifilosofi emva kwengqekembe
Ubungakanani botywala kunye nevolumu yokuthengisa
Uqoqosho kunye nokusetyenziswa kwee-cryptocurrensets
Imigaqo-nkqubo yelizwe kunye nelizwe
Njengoko uphonononga ngakumbi, uza kudibana nezinye izinto ocinga ukuba ziyahambelana namaxabiso e-cryptocurrency.
Umzekelo, ngoJanuwari 2021, ixabiso leBitcoin lenyuka nge-14% emva kokuba uElon Musk ephawule imali yedijithali kwiprofayile yakhe. Kananjalo, akusekho kude ukuyithatha into yokuba 'ukukhankanywa kwimidiya yoluntu' ayisiyonto ebalulekileyo enegalelo ekuhambeni kwamaxabiso e-cryptocurrensets.
Ewe kunokuvakala ngathi luluhlu olunzima ukujonga. Enkosi kwi-intanethi, ngoku ungarhuma kwiinkonzo ezihambisa iindaba zexesha lokwenyani kunye nohlaziyo olufanelekileyo kwii-cryptocurrensets. Ngale ndlela, awunyanzelekanga ukuba utyale lonke ixesha lakho uphanda kwimarike.
Uhlalutyo lobuGcisa kwiCrypto
Uhlalutyo lobuchwephesha, kwelinye icala, lufuna ukuba uhlalutye imeko zentengiso ye-cryptocurrency ngokujonga kwixabiso lembali yempahla yedijithali. Uya kusebenzisa iitshathi kunye nezalathi zobugcisa ukuqonda uluvo lweemarike zesibini esithile se-crypto.
Kukho uninzi lwezalathi zobuchwephesha ezifumanekayo kwimarike yanamhlanje- ezinje ngokuHamba komndilili, izikhombisi zeMACD, isalathiso somndilili wesalathiso, kunye nesalathiso samandla esihlobo - phakathi kwabanye abaninzi. Abo ubakhethileyo baya kuxhomekeka kwisicwangciso sakho sokurhweba kunye neenjongo zemali.
Kumrhwebi osakhasayo, ukugcina umkhondo wazo zombini izinto ezisisiseko kunye nezobuchwephesha kunokuba nzima kakhulu. Kulapho ke imiqondiso ye-crypto unokuza kumncedisi wakho.
Iimpawu zorhwebo ze-Crypto zizinto ezibangela ukusekwa kwiikhrayitheriya ezimiselweyo kwangaphambili njengeseti yezalathi zobugcisa. Banqumle isidingo sokwenza uphando kwimarike kunye nezinto zeasethi ngokwakho.
Endaweni yoko, imiqondiso yokuthengisa ibandakanya iingcebiso ezinje:
Nokuba kuya kufuneka ubeke okanye uthengise iodolo
Ukuba awunalo ixesha elaneleyo lokuchitha kuphando, ezi imiqondiso ye-crypto kwi-Learn 2 Trade ingaba ngumsindisi wobomi.
Icandelo 5: Funda indlela yokukhetha i-Crypto Broker
Ukurhweba ngeDijithali yemali kwenziwa ikakhulu kwi-Intanethi. Ukuze uthengise i-crypto ukusuka kwintuthuzelo yekhaya lakho, kufuneka kuqala ufumane umthengisi othembekileyo. Njengoko uyazi ngoku, umrhwebi wakho uqhuba yonke iodolo yakho yorhwebo egameni lakho. Ke ngoko, kubalulekile ukuba ufumane elichanekileyo lokusingatha imisebenzi yakho.
Sidibanise uluhlu lwezinto ezibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele xa ukhetha i-crypto broker ekwi-Intanethi.
Eyona ndlela yokuqinisekisa ukuba umrhwebi uthembekile kukujonga ukuba bayayiphatha na ilayisensi kwigunya lezemali. Indawo yokurhweba ilawulwa yimizimba eqinisekisa ukuba amaqonga okurhweba ngokuthengisa ahlala kwizikhokelo ezingqongqo - ukukhusela umdla wabarhwebi.
Umzekelo, abarhwebi abalawulwayo bayacelwa ukuba bagcine imali yabathengi kwiiakhawunti zebhanki ezahluliweyo kwaye bangenise kuphicotho rhoqo. Awona mabhunga aziwayo aziwayo yi-ASIC e-Australia, i-FINRA e-US, i-FCA e-UK, i-CySEC e-Cyprus kunye ne-MAS e-Singapore.
Into yokuqala kuluhlu lwakho lokutshekisha kukuqinisekisa ukuba umthengisi wakho omkhethileyo unephepha-mvume ukusuka kwelinye lala magunya.
Imirhumo yokurhweba kunye neeKomishini
Ukuze uququzelele urhwebo lwakho, abarhwebi babiza iifizi. Nalu ushwankathelo lweentlobo ezahlukeneyo zeefizi oza kuthi uhlangane nazo.
Iikhomishini yimirhumo ethe ngqo ebalwe njengepesenti yobungakanani borhwebo lwakho. Yithi, umzekelo, umthengisi wakho uxela ikhomishini ye-1.2% kwintengiso ye-cryptocurrency. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uhlawule i-1.2% xa ungena kwintengiso kwaye kwakhona xa uphuma kuyo.
Kodwa ungakhathazeki, baninzi abathengisi abakwi-Intanethi abakuvumela ukuba urhwebe ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini. Elinye lamaqonga abarhwebi abadumileyo yi-eToro, apho ungarhweba khona ngeemali ezili-16 zekhompyutheni.
Ukusasazeka yimali engathanga ngqo engumahluko phakathi kokubuza kunye nexabiso lokubhida le-crypto pair. Ngokungafaniyo nekhomishini, ayingomlinganiso oqingqiweyo kodwa uya kwahluka ngokuxhomekeka kwixabiso leasethi.
Masithi ixabiso lokuthenga le-EOS / USD yi- $ 4.3000, kwaye ixabiso lokuthengisa yi- $ 4.3002. Oku kuguqulela ekusasazekeni kwee-PIP ezi-2.
Ukuba ubeka urhwebo kwi-EOS, oko kuthetha ukuba uqala urhwebo ngokulahleka kwee-2 pips. Kuya kufuneka ufumane ngaphezulu kweepips ze-2 kolu rhwebo lwe-crypto ukuze ufumane nayiphi na inzuzo. Ngenxa yoko, ujonge ukusasazeka okuqinileyo kumthengisi wakho.
Ukurhweba kufuna ukuba ubeke imali eninzi kwi-broker yakho. Kananjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba yeyiphi idiphozithi kunye nokukhetha ukufumaneka ezikhoyo eqongeni.
Abarhwebi ababalaseleyo kwi-intanethi baya kuba nezinto ezimbalwa onokukhetha kuzo. Oku kuya kubandakanya ukuhanjiswa kwebhanki, amakhadi etyala / okuthenga ngetyala, kunye ne-e-wallet yomntu wesithathu njengePaypal.
Umthengisi ogqwesileyo wokuRhweba ngeCrypto kwi-Intanethi
Nokuba sinoluhlu lokukhangela, siyazi ukuba ukufumana umthengisi ofanelekileyo kwi-intanethi kunokuba ngumsebenzi onzima. Yiyo loo nto siye sazibekela uxanduva lokukhangela ezona zibalaseleyo crypto yorhwebo iindawo ze2021.
Nantsi ke umthengisi ophawula zonke iindlela zethu.
1. I-AVATrade -I-Trade Crypto CFDs kunye nokusasazeka okungqongqo
I-AvaTrade liqonga elime kakuhle lokurhweba eliqhubeke nempumelelo yalo kurhwebo lwe-Intanethi ngaphezulu kweshumi leminyaka. Eyona nto ibalulekileyo kwi-AvaTrade linani leelayisenisi ezilawulayo elizibambayo, ezivumela urhwebo ukuba luqhube ukurhweba kwimimandla eyahlukeneyo. Oku kubandakanya i-UK, i-Australia, i-EU, iJapan, uMzantsi Afrika, kunye nokunye.
Ayisiyiyo kuphela ngokwemeko yokuma kolawulo, kodwa i-AvaTrade iyakhanya xa kufikwa kwizibonelelo zokurhweba ezikhoyo kwisiza. Nokuba zizalathi zobuchwephesha, iitshathi, okanye izixhobo zolawulo lomngcipheko-i-AvaTrade ikukhusele.
Umrhwebi ukwadityaniswa namaqonga orhwebo amaninzi- 'iZulutrade', kunye 'neDuplitrade', kunye nesoftware onokuyisebenzisa xa urhweba uhamba.
Idiphozithi ye-$ 100
Ukuphakanyiswa okunikezelwa kuzo zonke iimarike
Idemo yasimahla yokuthengisa yorhwebo isebenza kuphela kwiintsuku ezingama-21
Icandelo 6: Funda ngeNtengiso ye-Crypto namhlanje-ukuhamba
Kwesi sikhokelo sigqibeleleyo, sigubungele yonke imiba yokurhweba nge-imali yedatha. Ngoku, okuseleyo kuwe kukuvula iakhawunti yakho yomrhwebi kwaye uqalise uhambo lwakho lokurhweba.
Njengayo yonke enye into, siya kukunika umzekelo apha ukukukhokela kwinkqubo. Siza kusebenzisa i-Capital.com njengesikhokelo sethu ukubonisa ukuba ungayibeka njani intengiso yakho ye-cryptocurrency yokuqala.
Inyathelo 1: Vula iAkhawunti
Qalisa ngokuya kwiwebhusayithi eyiCapital.com kwaye ucofe iqhosha elithi 'Joyina ngoku'. Ungagcwalisa iinkcukacha zakho ezifana negama elipheleleyo, idilesi, i-imeyile, umhla wokuzalwa, njalo njalo ukwenza iakhawunti yakho.
Inyathelo 2: Faka i-ID
Njengoko iCapital.com ihambelana nemigaqo ye-KYC, kuya kufuneka ulayishe i-ID ekhutshwe ngurhulumente efana nepasipoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba ukuqinisekisa isazisi sakho.
Kwi-Capital.com, ungagcina eli nxalenye kamva Kufuneka uye kuyo kuphela ukuba ufuna ukurhoxa okanye ubeke ngaphezulu kwe- $ 2,250.
Inyathelo lesi-3: Faka ezinye iiNgxowa-mali zoRhwebo
Ngokumiselwa kweakhawunti yakho, ungaqhubeka nokufaka imali. Njengoko besigubungele ngaphambili, unokukhetha ukuhambisa imali ngogqithiso lwebhanki, ikhadi lekhredithi / lokutsala imali, okanye nge-e-wallets ezinjengePayPal, iNeteller, okanye iSkrill.
Inyathelo 4: Qalisa ukuRhweba ngeCrypto
Ngoku uxhotyiswe ngokupheleleyo ukuqala ukurhweba nge-crypto. Ukuba ufuna ibrashi ekhawulezayo kwi-odolo- ungafunda kwiseshoni yethu kwii-Orders zorhwebo ze-Crypto kwakhona.
Ukuba ufuna ukuvavanya kuqala amanzi, iCapital.com ikunika ukufikelela kwiakhawunti yedemo eza nemali yephepha. Xa sele ukulungele, unokukhangela i-cryptocur lwemali ethile ofuna ukuyithengisa, faka uhlobo lweodolo, kwaye ucofe u 'Vula urhwebo'.
Yiyo-uyibekile intengiso yakho ye-crypto kwiCapital.com!
Funda ukuba ungayithengisa njani i-Crypto-Isigqibo
Kwethu Funda indlela yokuThengisa isikhokelo se-Crypto, sigubungele yonke into oyifunayo malunga nale klasi ye-asethi yedijithali. Okwangoku, kuya kufuneka ube nokuqonda okucacileyo malunga nokuba zeziphi ii-cryptocurrensets kwaye yintoni ekufuneka uyazi ngaphambi kokungena kwintengiso.
Kuhlala kungumbono olungileyo ukuqhubeka nokuzifundisa kurhwebo, nanjengoko ufumana amava. Qiniseka ukuba ufumana ukuqonda okuqinisekileyo kwiimvakalelo zentengiso ye-cryptocurrency oyikhethileyo kunye nokuziqhelanisa neakhawunti yedemo ngaphambi kokuba ungene.
Ukuqukumbela-kuya kufuneka ufumane umthengisi we-Intanethi olawulwayo kunye nohlonitshwayo onokuthi enze urhwebo lwe-imali yedatha ngokukhawuleza nangokulungele wena. Ukuba uyathandabuza, ungasoloko uhamba neCapital.com - apho unokurhweba khona nge-crypto kwi-zero commission.
Ngaba ukurhweba nge-crypto kwi-Intanethi kuthathwa njengokukhuselekileyo?
Ewe kukhuselekile ukurhweba nge-imali yedatha kwi-Intanethi-ngenxa yokuba ukhetha umthengisi olawulwayo.
Yintoni emisela ixabiso lemali yedijithali?
Zininzi izinto eziqhuba ixabiso le-imali yedatha. Oku kubandakanya uqoqosho lwehlabathi, imeko yezopolitiko, utshintsho kummiselo, uphuhliso lobuchwephesha, nokunye okuninzi. Ngenxa yoko, kubalulekile ukuba uhlale uhlaziywa malunga nophuhliso lwamva nje olunxulumene nemarike ye-crypto.
Ndingayenza njani inzuzo ngokuthengisa i-crypto?
Ukuze wenze inzuzo kurhwebo lwe-crypto-kuya kufuneka ukwazi ukuqikelela ngokuchanekileyo ukuhamba kwexabiso kwempahla ye-digital. Ubeka iodolo yakho ngokokuthelekelela kwakho, kwaye ukuba intengiso ihambela kwicala olixele kwangaphambili-uyakwenza inzuzo.
Ngaba kunokwenzeka ukwenza ingeniso yokurhweba nge-crypto?
Ewe. Unokwenza inzuzo ngokurhweba nge-crypto, kodwa kufuneka uqale uqikelele ngokuchanekileyo kwicala lamaxabiso e-asethi- kwaye ubeke iodolo efanelekileyo kumthengisi olawulwayo. I-eToro ayi-100% ngaphandle kwekhomishini.
Ngaba ungathengisa i-crypto e-US?
Ewe, imakethi ye-cryptocurrency isebenza kakhulu e-US. Sicebisa ukuba ufumane umrhwebi olawulwayo onje nge-eToro ukuze uqalise. Nangona kunjalo, khumbula ukuba awuyi kuba nakho ukufikelela kwi-CFD ye-crypto-njengoko ingavunyelwe kweli lizwe. .